YEYINTNGE(CANADA): Friday, May 21
21 May 2010 ဒိုင်ယာရီ
http://ifile.it/1c2z9sm21 May Yeyintnge_s Diary Summary only...
သုတေသနနှင့်လေ့လာရေးဌာနဝေဖန်သုံးသပ်ချက် အမှတ်စဉ် (၇/၂၀၁၀)(၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၅ ရက်) “အပြောင်းအလဲ” ဆိုတာကို အာဏာကိုင်ထားနိုင်သူကသာ လုပ်နိုင်တယ်။ “အပြောင်းအလဲ” ဆိုတာမှာ အမြင့်ဆုံး မူပေါ်လစီတွေကနေစပြီး၊ ရာထူးအဆင့်တာဝန် အပြောင်းအလဲထိ လုပ်ဆောင်တာကို ဆိုလိုပါတယ်။ ရာထူးအဆင့်တာဝန် အပြောင်းအလဲလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ထုတ်ပစ်တာ/ ဖြုတ်ပစ်တာ/ ခန့်အပ်တာ/ ပြောင်းရွေ့တာ/ အငြိမ်းစားပေးတာအထိ ပါဝင်ပါတယ်။ အာဏာကို စိတ်ကြိုက်ကိုင်တွယ်ထားနိုင်တဲ့ ကာလအထိတော့ “အပြောင်းအလဲ” မှန်သမျှကို စိတ်တိုင်းကျ လုပ်နိုင်တယ်။ ဘယ်သူကမှ ဦးနင်းပဲ့ထောင် မလုပ်ဝံ့ဘူး။ မီးသေတယ်လို့ ပြောရမယ်ထင်တယ်။ ဗိုလ်သန်းရွှေဟာ စစ်အုပ်စုထိပ်သီးပဲ။ အာဏာကိုင်ထားနိုင်သူ ဖြစ်တယ်။ ဒီတော့ “အပြောင်းအလဲ” ဆိုတာတွေကို သူ့စိတ်ကြိုက် လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ လုပ်နိုင်နေပါသေးတယ်။ ဝန်ကြီးချုပ်/ဝန်ကြီး စသဖြင့် အစိုးရတာဝန် ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန်တို့အုပ်တွေကို “ဗိုလ်” ကနေ “ဦး” အဖြစ် ပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်။ ဗိုလ်သန်းရွှေတို့ (နအဖ) စစ်အုပ်စုဝင် ထိပ်သီးတွေ၊ နာယကလုပ်ခဲ့တဲ့ လူမှုရေးအသင်းလို့ဆိုတဲ့ ကြံ့ဖွှံ့အသင်းက “လူမှုရေးအသင်း” ကနေ “နိုင်ငံရေးပါတီ” အဖြစ် ပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာ မှတ်ပုံတင်စေခဲ့တယ်။ စိတ်ကြိုက်ခန့်အပ် တာဝန်ပေးထားတဲ့ “ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်” ဥက္ကဋ္ဌကလည်း “လက်ရှိဝန်ကြီးများက ကြံ့ဖွံ့ပါတီထောင်ခြင်းမှာ ဥပဒေနဲ့ညီညွတ်သတဲ့”။ အာဏာကိုင်ထားနိုင်တဲ့ စစ်အုပ်စုဟာ အနှစ် ၂၁ နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာအခြေခံဥပဒေကို ဖျက်သိမ်းနိုင်တယ်/စိတ်ကြိုက်ရေးဆွဲနိုင်တယ်။ (၁၉၄၇/၁၉၇၄ ဥပဒေများ ဖျက်သိမ်းပြီး/၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံရေးတယ်)ပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူပွဲ ကျင်းပနိုင်တယ်။ (၂၀၀၈ မေလ ၁၀ ရက်နှင့် ၂၄ ရက်နေ့တွေမှာ စိတ်ကြိုက်ရလဒ်ထွက်အောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်)ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပေးနိုင်တယ်။ (၁၉၉၀ မေလ ၂၇ ရက် ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပေးအုံးမယ်)ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို အသိအမှတ်မပြုဘဲ နေနိုင်တယ်။ ( ၁၉၉၀ ခု ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို အသိအမှတ်မပြုဘူး)နိုင်ငံရေးပါတီများရဲ့တည်ရှိမှုကို စိတ်ကြိုက်ချယ်လှယ် ဖန်တီးနိုင်တယ် (မတ်လ ၈ ရက်နေ့ထုတ် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေများ)နိုင်ငံရေးသမားနဲ့ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှကို ဖိနှိပ်ချေမှုန်းပြီး နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ် ချမှတ်နိုင်တယ်။လူမှုရေးအသင်းဆိုပြီး“အမျိုးသားနိုင်ငံရေး” လုပ်နိုင်ပြီး/ နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်ပြောင်းပြီးလည်း “ပါတီနိုင်ငံရေး” လုပ်နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလိုဖြစ်ရပ်တွေအပေါ်ကနေ အခုလို ကောက်ချက်ချနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ “တရားမျှတမှု/ ဥပဒေနဲ့ညီညွတ်မှု”တို့ဆိုတာ ဗိုလ်သန်းရွှေစစ်အုပ်စု စိတ်ကြိုက် ပြောင်းလဲစီမံနိုင်တာမှန်သမျှကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုဖို့ ဖြစ်တယ်၊ ခေါ်ဆိုဖို့ဖြစ်တယ် ဆိုတာပါပဲ။ တခြားဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ ဗိုလ်သန်းရွှေစစ်အုပ်စုဆန္ဒနဲ့ မကိုက်ညီတာမှန်သမျှဟာ အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိပါးတာပဲ။ တည်ငြိမ်းမှုနဲ့ အေးချမ်းသာယာမှုကို ပျက်ပြားစေတာပဲ။ တည်ဆဲဥပဒေကို ချိုးဖောက်တာပဲ။ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်တာပဲ ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက် တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုနဲ့ ငြိစွန်းတော့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီကနေ့ ဗိုလ်သန်းရွှေစစ်အုပ်စုက ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်မှာ လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဟာ တရားမျှတမှုလည်း ရှိမှာမဟုတ်သလို ဥပဒေနဲ့လည်း ညီညွတ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ပြည်တွင်းပြည်ပက တောင်းဆိုနေသလို နိုင်ငံရေးအင်အားစုအားလုံး ပါဝင်နိုင်ရေးဆိုတာကတော့ သိပ်ကို အလှမ်းဝေးသွားပါပြီ။ (နအဖ) စစ်အစိုးရ ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ၊ ပုဒ်မ (၂၅) အရ (NLD/SNLD) တို့ဟာ တရားဝင် ပါတီအဖြစ် မတည်ရှိနိုင်တော့ပါဘူး။ (နအဖ) ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်အာဏာပိုင်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်က ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင် မပေးနိုင်ဘူးလို့ အကြောင်းပြန်ကြားလိုက်ပါပြီ။ ဒါ့အပြင် ကုလသမဂ္ဂ/ အီးယူ/ အာစီယံ စတဲ့ နိုင်ငံတကာနဲ့ ဒေသတွင်းက စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့များကိုလည်း လာရောက်ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက “နိုင်ငံတကာ လေ့လောရေးအဖွဲ့များ လာရောက်ရန် လိုအပ်မည်မဟုတ်” လို့ ပြောထားပြီးပါပြီ။ ဒါပေမယ့်လည်း “အပြောင်းအလဲ” ဆိုတာ အာဏာကိုင်ထားသူကချည်း သူ့အလိုဆန္ဒအတိုင်း အမြဲမပြတ် စေစားနိုင်တာမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ဆန္ဒနဲ့ မဆိုင်တဲ့ အပြောင်းအလဲဆိုတာတွေကို မတတ်သာတဲ့အခါ ပြောင်းလဲပေးရတာမျိုးတွေ အနီးအဝေး သမိုင်းမှာ ရှိပါတယ်။ ၈၈ ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီးဟာ အုပ်စိုးသူတွေဆန္ဒနဲ့ မဆိုင်တဲ့ အပြောင်းအလဲကြီးဖြစ်ပါတယ်။ လူထုတစ်ရပ်လုံး ပါဝင်လာတဲ့ လှုပ်ရှားမှုကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အုပ်စိုးသူတွေ ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်တဲ့ လှုပ်ရှားပြောင်းလဲမှုကြီးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို “အပြောင်းအလဲ” ကိုတော့ လူထုတစ်ရပ်လုံး ပါဝင်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုကြီးတွေကနေ ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ယနေ့မြန်မာပြည်မှာ လိုအပ်နေတာက လူထုတစ်ရပ်လုံးပါဝင်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုကြီးဖြစ်ပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို လူထုတစ်ရပ်လုံး ပါဝင်နိုင်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုကြီးနဲ့ ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ ဗိုလ်သန်းရွှေစစ်အုပ်စု စိတ်ကြိုက်ရေးဆွဲ ဖန်တီးထားတဲ့ အပြောင်းအလဲတစ်ခုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံရေးအင်အားစုအားလုံး ပါဝင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ တရားမျှတမှုလည်း ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ သူတို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ဥပဒေနဲ့တောင် ညီညွတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ x x x x xhttp://www.dpnsburmese.org/
The Voice Weekly Journal Vol. 6-28, May 24-30, 2010.
voice_6-28 Summary only...
ပေါင်းလောင်းရေလှောင်ကန်တွင် ဓာတ်အားပေးဖို့ ရေလက်ကျန် (၂၀)ရက်စာသာ ရှိတော့ကြောင်းထုတ်ပြန်တဲ့စာ
ပေါင်းလောင်းရေလှောင်ကန်တွင် ဓာတ်အားပေးဖို့ ရေလက်ကျန် (၂၀)ရက်စာသာ ရှိတော့ကြောင်း မြန်မာ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးအဖွဲ့မှ မေလ(၁၄)ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်တဲ့စာ.... ဓာတ်ပုံပေးပို့လာသူ ရဲရဲတောက် ဘားမားပါပါရာဇီ......ပေါင်းလောင်းရေလှောင်ကန်တွင် ဓာတ်အားပေးဖို့ ရေလက်ကျန် (၂၀)ရက်စာသာ ရှိတော့ကြောင်း၊ ကမ်းလွန် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း ပေါက်ခြင်းကြောင့် မြန်မာ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးအဖွဲ့မှ ....စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ၊ စက်မှုဇုန်များ၊ ရပ်ကွက်အသေးစား စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများ Shoppin mall များ၊ Super Market များ အား လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပေးဝေနေခြင်းကို ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ ၁၄ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ရပ်ဆိုင်းကြောင်း . မြန်မာ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးအဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများအား ဓာတ်အားဖြတ်တောက်ထားရန်တဲ့၊ စည်ပင်၊ အစိုးရကုမ္ပဏီရုံးခန်းများ၊ အား ဓာတ်အား ဖြတ်တောက်ခြင်း မပြုရန်တဲ့... တတ်လည်းတတ်နိုင် ပါပေတယ်.. မောင်မင်းကြီးသားတို့ရယ်....ယခုနှစ် ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလက ပြည်တွင်းဂျာနယ် တစ်စောင် မှာပါတဲ့ .. သတင်းတစ်ပုဒ်ကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်..။ ဒီသတင်း မှန်မမှန်ဆိုတာ အခုလက်ရှိ အခြေအနေတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ် လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ပြည်တွင်းမှ မကြာသေးမှီ အတွင်းက ခေတ္တရောက်ရှိလာတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦး ပြောပြတာကတော့ ပြည်တွင်းမှာ စက်မှုလုပ်ငန်းတွေ ဘာမှ မထုတ်လုပ်နိုင်ကြောင်း ဟန်ပြပဲဖြစ်ကြောင်း .. မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ဗိုလ်ချုပ်အသိုင်းအဝိုင်းမှာ သွားလာလှုပ်ရှားနေရတဲ့ အခြေအနေမှာ မီးပြတ်တဲ့ ကိစ္စပြောဖြစ်တဲ့ အခါ သူတို့ဗိုလ်ချုပ်မိသားစု အသိုင်းအဝိုင်းမှ အံ့သြနေကြောင်း ဟုတ်ရဲ့လားလို့ မေးကြောင်း... ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့နေတဲ့နေရာတွေ၊ ခရီးထွက်တဲ့ နေရာတွေတိုင်းမှာ နောက်က မြန်မာ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးဋ္ဌာနမှ အငြိုငြင်မခံရအောင် တောက်လျှောက် လိုက်ပြီး မီးမပြတ်အောင် လုပ်ပေးနေရတဲ့ အတွက်ကြောင့် မီးပြတ်တာကို မခံစား၊ မကြုံဘူးတဲ့ အတွက်ကြောင့် ဟုတ်ရဲ့လားလို့ မေးတာဖြစ်ကြောင်း... ပြည်သူတွေမှာတော့ မီးမလာ၊ရေမလာတဲ့ ဒုက္ခကို အလူးအလိမ့် ခံနေရကြောင်း ပြောပြသွားပါတယ်။မီးရမယ်၊ ရေရမယ် ဆင်ဖမ်းမယ်၊ မြင်းဖမ်းမယ် ဆိုတာ နအဖတက်လာကတည်းက ပြောလာလိုက်တာ အနှစ်(၂၀)ကျော် နေပါပြီ... အနှစ်(၂၀) ဆိုတဲ့ အချိန်ဟာ စစ်မှန်တဲ့ ပြည်သူ့ ဒီမိုကရေစီအစိုးရ တစ်ခုသာ ရှိခဲ့ရင် တိုင်းပြည်တစ်ခု ထူထောင်ဖို့ အတွက် လုံလောက်တဲ့ အချိန်တစ်ခုပါ။ အခုတော့ ကြာလေ ဆိုးလေပါပဲ ... စက်မှုနိုင်ငံကို ဖယောင်းတိုင်၊ ဆင်ဖြူတော်၊ ကြေးမုံ ၊ မြန်မာ့အလင်းနဲ့ ကြပ်ပြေးက မင်းတရားကြီးရဲ့ ပါးစပ်က ထွက်တဲ့ လေကြီးလေကျယ် အခြေအမြစ်မရှိတဲ့စကားတွေနဲ့ ထူထောင် ပါတော့မယ်။ Posted by ဒီမိုဝေယံhttp://www.demowaiyan.co.cc/2010/05/blog-post_6915.html
ABMA Journal Volume 1 No 8 Summary only...
The Voice Weekly ဂျာနယ် Vol.6/ No.27
Voice (6 27)eBook Summary only...
The Voice Weekly Journal Vol. 6-28, May 24-30, 201...
ပေါင်းလောင်းရေလှောင်ကန်တွင် ဓာတ်အားပေးဖို့ ရေလက်က...
Zoner Photo Studio is renowned software that makes your work with photos easy from start to finish [Giveaway]